प्रधानमन्त्रीको गृह प्रवेश- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्रीको गृह प्रवेश
असार १०, २०७४ विमल निभा
अन्तत: सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्षित ‘गृह प्रवेश’ सफलतासँग सम्पन्न भएको छ । हो, मेरो संकेत प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारतर्फ हो ।
अन्यथा आफ्नो निजी घरमा त उनी त्यसै पनि रहिरहेका थिए नि ! के बूढानीलकण्ठको त्यत्रो भव्य दरबारजस्तो घर त्यसै बनाइएको हो र ? यहाँ उनी सपरिवार आनन्दपूर्वक बसिरहेका थिए । तर ‘आनन्दपूर्वक’ भन्नुचाहिँ त्यति ‘वास्तविकता’को नजिक नहोला कि ? कुन्नि, किन मलाई के लाग्छ भने उनी आनन्दपूर्वक नभएर असाध्यै दु:खका साथ बूढानीलकण्ठको घरमा रहिरहेका थिए !
यही बूढानीलकण्ठीय ‘देउवा–बसाइ’ नै यस्तो दु:खको कार्यकारण थियो । किनभने दु:खहरू थरीथरीका हुन्छन् । कहिलेकाहीं विलकुलै नसोचिएको दु:खको पनि अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो शेरबहादुर देउवा गरिरहेका थिए । यो उनको चौथो पटकको प्रधानमन्त्री नभइसकेको बेलाको कुरो हो । यो बेलाको ‘अद्भुतता’को थोरै कल्पना गर्नाेस् । बडो रमाइलो छ !
‘हजुरको शनि तेस्रो स्थानमा भए पनि चन्द्रमा चाहिँ पहिलो स्थानमा छ ।’ एक दिन ज्योतिषको पात्रो पल्टियो ।
‘यसको माने के हो पण्डित ?’ यस्तो उत्सुक सोधाइ थियो ।
‘हजुर, शनिले जति रोके पनि मूल चन्द्रमा बलियो भएकोले हजुर एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ ।’
‘हो र पण्डित ?’ खुसीको आवेगमा नि:सृत प्रश्न ।
‘मेरो ज्योतिषशास्त्रको ज्ञानले यही भन्छ हजुर ।’
‘त्यसो भए, भन्देखि, एकपटक मेरो हात पनि हेरेर बताऊ त पण्डित ।’ एक हात तेर्सियो अगाडि, ‘ल हेर, हेर ।’
त्यसपछि ज्योतिषको हातमा हात आयो । र एकदमै सूक्ष्म प्रकारको हस्त–निरीक्षण हुनथाल्यो । अनि एक्कासी मुखमण्डल उज्यालियो ज्योतिषको, ‘हजुरको भाग्यरेखा त अति नै प्रबल छ ।’
‘पण्डित, यसलाई प्रस्टसँग बताऊ ।’ एक प्रकारको आदेशात्मक स्वर आयो ।’
‘बधाई छ, हजुर ।’
‘केको बधाई पण्डित ?’
‘हजुरलाई चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’
‘यी कम्युनिष्टहरूले पनि पण्डित ?’ अधैर्य सोधाइ थियो ।’
‘हजुर, कम्युनिष्टहरूका पनि रोक्ने तागत छैन ।’
‘अहो, भन्देखि, म प्रधानमन्त्री हुने भएँ ।’ आफ्नो दाहिने हात उल्ट्याइपल्टाइ आफैं नै दंग, ‘म साँच्चिकै फेरि प्रधानमन्त्री हुने भए त पण्डित ?’
बूढानीलकण्ठको घरमा भएको यो ‘देउवा–ज्योतिष’ संवादको लामो समयसम्म पनि केही भएन । मतलब, नेपाली कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन नपाइकनै बूढानीलकण्ठको आफ्नै घरमा चुपचाप बस्नुपरेको थियो । यसले उनी पटक्कै खुसी थिएनन् । यो उनको बूढानीलकण्ठको घरको पुरै दु:खपूर्वकको बसाइ थियो । यही उनको दु:खको अवधिमा धमाधम केही कांग्रेसी प्रकृतिका घटनाहरू घटित भए । जस्तै– नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असामयिक निधन भयो । तत्पश्चातका सभापति सुशील कोइराला पनि त्यति धेरै कुर्सीमा टिकिरहन सकेनन् । एउटा सानो समयमै नेपाली कांग्रेसतर्फबाट प्रधानमन्त्री भएर उनको देहावसान भयो । र उनी (शेरबहादुर देउवा) अर्का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीको ‘घोडदौड’मा बेसरी परास्त गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति भए । तथापि प्रधानमन्त्री भने हुनसकेका थिएनन् । अर्थात् चौथो पटकको प्रधानमन्त्री । यही उनको चौपट्टै चिन्ताको कारण थियो । र यो शनै:–शनै: दु:खमा बदलियो । अतएव अपार दु:खपूर्वक आफ्नै बूढानीलकण्ठको घरमा बसिरहनुको साटो उनीसँग अरू के विकल्प थियो त ? यसको परिणामस्वरूप कता–कता सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो स्थायी विश्वासबाट यताउता भइरहेका थिए । उनलाई ज्योतिषशास्त्रमा थोरै अविश्वास हुनलागेको थियो । ‘कतै त्यो मुला ज्योतिषीले झुठो बोलेको त थिएन ? कुनै अर्कै जान्ने ज्योतिषलाई देखाउनुपर्ने भयो । होइन–होइन, यही ज्योतिष (उनको निजी ज्योतिष) ले भनेर म तीन–तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेंँ । अब चौथोपटक पनि फ्याट्टै प्रधानमन्त्री हुन के बेर ! भन्देखि, म चौथोपटक पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ–हुन्छु । यी बदमास कम्युनिष्टहरूले रोकेर हुन्छ ?’ आखिरीमा यस्तै भयो । उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘जेन्टलमेनली’ सहयोगले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने । यसको अर्थ के हो भने त्यो ज्योतिषको भनाइ असत्य थिएन ।
उही ज्योतिषको साइत बमोजिम सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो बूढानीलकण्ठस्थित घरबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरेका हुन् । यस शुभ उपलक्ष्यमा एक निक्खर कालो रंगको बोको पनि मूलढोकामा काटियो । अर्थात् यावत् विधि–विधानको सजगताका साथ पालना भयो । केही पनि छुटछाट भएन । यस प्रकार चौथो पटकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सँगसँगै अन्धविश्वास, श्रीमती आरजु देउवा, कुरीति, सुपुत्र जयवीरसिंह देउवा, अबुद्धि, पुरातनता, आडम्बर, विवेकशून्यता, अपठितपन, जडता आदिले पनि सुस्तरी गृहप्रवेश गर्दा भए ।
प्रकाशित : असार १०, २०७४ ०८:२७
राजनीतिक विश्वविद्यालयको खाँचो
असार १०, २०७४ डा. सुमन कर्माचार्य
राज्यको हरेक अवयवको सञ्चालन राजनीतिमार्फत हुने गर्छ । हरेक असल या खराब निर्णयहरूको जश या अपजशमा राजनीतिको नाम जोडिन्छ, त्यो सुनाम होस् या कुनाम । नेपालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि झन्डै २७ वर्षको इतिहासमा प्रजातान्त्रिक संस्कार स्खलित हुँदै गए जस्तो भान हुन्छ । यसमा अघिको पञ्चायती संस्कृतिको आयात भए जस्तो भेटिन्छ । एक राजाको हुकुमको सट्टा सयौं राजाहरूको महात्त्वाकांक्षा जीवित हुनलागे जस्तो देखिन्छ ।
पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अमूक वडाध्यक्षले ५० लाख खर्च गरे । अमूक मेयरले डेढ करोड खर्च गरे । विद्यार्थी युनियनको चुनावमा १० लाख खर्च भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा ५ लाख खर्च भएछ भन्नेजस्ता बाक्लै कुरा सुनिन्छन् । के निर्वाचन आयोग तथा ती सम्बन्धी निकायमा यसबारे नियम र कानुन छैन ? भएका नियम कानुनहरू नागरिकले मान्नु पर्दैन ? यी यावत प्रश्नहरूमा कसले टाउको दुखाउने ?
ओपन सेक्रेट पहिलो कुरा, मतको किनबेचको बजार छ । पैसा र खानपानमा मतको वारपार हुने गर्छ । हामीले प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेर ल्याएको मतदानको अधिकार के विवेक बेचेर किनबेच गर्नलाई हो ? दोस्रो, उम्मेदवारले उम्मेदवारी प्राप्त गर्न कित शक्तिको कि पैसाको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा यसका उदाहरण पाइए । व्यापार, व्यवसाय र ठेकेदारीबाट राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर प्राप्त कालो धनलाई कतिपय बेला यसमा प्रयोग भएको पाइयो । के सहिदहरूको रगत अब पैसामा लिलामी भएकै हो त ? तेस्रो, उम्मेदवार खास कित आफै या आफ्नै मान्छे नभए पनि आफ्नो गुट विशेषको पर्नुपर्छ । यसमा त्याग र बलिदान, आदर्शप्रतिको निष्ठा र इमानदारिताको खास मूल्य रहँदैन । चौथो, उम्मेदवारको क्षमता, समाज विकास गर्नसक्ने ल्याकतका आधारमा होइन, दाताहरूको स्वार्थमा प्रयोग भइरहन्छ या रहँदैनमा जाँचिन्छ । यी सब नेपालका हरेक टोल–बस्तीहरूमा चियागफहरूका घनिभुत छलफल हुने विषयवस्तु हुन् । तर विमर्श गरिनुपर्ने तहका सबै मौन । अनि यसबाट प्रश्न उब्जन्छ, नेपालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र बलिदानीहरूले यही संस्कार र चरित्र खोजेको हो ?
यो हाम्रो राजनीतिको समस्या हो । तर यसको समाधान पनि छ । हरेक समस्याले आफै समाधान लिएर आउँछ । मात्र समस्या देख्नेहरूले जाँगर लगाएर समाधान खोज्छन् या खोज्दैनन्, त्यसमा भर पर्छ । इतिहासमा आफूले गरेका दु:ख र बलिदान तथा आफूजस्तै सयौं साथीले पाएका सहादतहरूलाई राजनीतिको निर्णय गर्ने समयमा एकपटक निर्णयकर्ताहरूले सम्झिए मात्र भने पनि नेपालका हालका राजनीतिक समस्याहरूले केही हदसम्म निकास पाउनेछ ।
हालसम्म नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको झन्डै ७६ वर्षको लामो लडाइँका पहिला पंक्तिका नेताहरूको अवसान भइसकेको छ । जसले राणाशासन विरुद्ध लडेका थिए । अब दोस्रो पंक्तिका नेताहरू जो पञ्चायती निरंकुशता विरुद्ध लडेका थिए, उनीहरूका हातमा राजनीतिक निर्णयको कार्यभार गएको छ । वास्तवमा, राजनीतिकर्मीहरूको पहिलो विश्वविद्यालय राजनीतिक दल नै मानिन्छ । तर राजनीतिक दलहरूबाट उचित आचरण, व्यवहार र पाठ सिक्न सकेनन् भने आउँदो पुस्ताले राजनीतिलाई सकारात्मक बाटो दिनसक्ने छैनन् । दोस्रो पुस्तामा केही नैतिकता र निष्ठाको स्खलन देखिएको छ । अब आउन लागेको तेस्रो पुस्तालाई दोस्रो पुस्ताले पहिलो पुस्ताको जस्तै आदर्श र निष्ठाका आधारमा राजनीतिक चरित्र देखाउन सकेन भने नेपालको प्रजातन्त्र संकटमा पर्नेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम त रहला, तर चीन र उत्तर कोरियाको जस्तो हुन बेर लाग्ने छैन ।
विद्यालयहरूमा व्यक्तिगत नैतिक शिक्षाको साथसाथै समाज र जनताको लागि पनि योगदान गर्ने राजनीतिक शिक्षाको जरुरी छ । राजनीति, स्वयंसेवा र समाजसेवा हो भन्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ । केही पाउनभन्दा केही दिन, गुमाउन र त्यसबाट आनन्दित हुन राजनीति गरिन्छ भन्ने धारणा विकसित गराउनुपर्छ ।
कक्षा ९ देखि जसरी भविष्यमा के बन्ने भनी अनुमानित विषयहरूको छनोट गरिन्छ, त्यसैगरी राजनीतिक शिक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । राजनीतिक शास्त्र सिकाउनु भनेको राजनीतिक सिद्धान्तहरूको विवेचना मात्र होइन । देशको भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक इतिहास, जनसंख्या, सामाजिक बनोट, भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला आदिको अध्ययन र सही विवेचना गर्नसक्ने विद्यार्थीको उत्पादन हो । व्यवस्थापकीय कुशलता, नेतृत्व क्षमता, भौतिक विषयहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, विश्व परिवेशको अध्ययन तथा यसबाट प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान, सीप र आचरणले सही राजनीतिकर्मीहरू जन्माउन सकिन्छ । विद्यालय अध्ययन नगरेकाहरूलाई अनौपचारिक राजनीतिक शिक्षाको माध्यमबाट राजनीतिक ज्ञान र सीप विकास गराउन सकिन्छ । यसरी अध्ययन, अध्यापन गराउने खुला राजनीतिक विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीलाई पेसा, देश र जनताको हितमा सकारात्मक आविष्कार गर्ने र नेतृत्व दिने वैज्ञानिकका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थी युनियनका चुनावहरूलाई प्रजातान्त्रिक आचरण सिकाउने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । राजनीति खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निर्वाचन र राजनीतिकर्मीको क्रियाकलापहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने र सीप विकास गर्ने पुस्तकालयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
कमसेकम स्थानीय र प्रान्तीय तहका पदाधिकारीमा राजनीतिक विद्यालयको १२ कक्षासम्म या स्नातकसम्म अध्ययन गरेका या अनौपचारिक शिक्षामार्फत यो बराबर ज्ञान र सीप हासिल गरेका विद्यार्थीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । संघीय सदन र सरकारका लागि कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरी या राजनीतिक खुला विश्वविद्यालयको यस सरहको शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेर हरेक विषयगत मन्त्रीहरू सो विषयका विशेषज्ञ र ज्ञाता भए नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा पाउनेछ । तर विश्वविद्यालयको शिक्षाले नैतिकता र इमानदारिता सिकाउँदैन । यो हरेक व्यक्तिको सोचाइ र भोगाइको स्तरले निर्धारण गर्छ । सही विवेक दिने खुला विश्वविद्यालय आजको खाँचो हो । वास्तवमा हरेक मानिसको दिमाग नै पहिलो कुरा हो । यसले सकारात्मक सोच सिकायो भने समाज र जनताका लागि योगदान गर्न पनि सिकाउँछ । जसले देशको मियोरूपी राजनीतिलाई असल दाइँ गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ र देशका हरेक पक्षहरू सङलिँदै जानेछ ।
प्रकाशित : असार १०, २०७४ ०८:२६